Warraaksi biyyaalessaa FXG bifa haaraa ta’een ganama har’aa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti dhohee jira. « QEERROO
Warraaksi biyyaalessaa FXG bifa haaraa ta’een ganama har’aa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti dhohee jira.
November 20, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
Sadaasa 20 bara 2017
Gootowwan barattoonni moorichaas ganamarraa ka’uudhaan mooraa yuunversiitii wallaggaa keessa oliif gadi naanna’anii sagalee isaanii dhageessifachaa otuu jiranii waraanni wayyaanee barattoota addaan facaasee jira.
Gaaffiin barattoonni mooraa yuunversiitii wallaggaa gaafachaa jiranis gaaffii mirgaa kan kabajamuu mirga Abbaa biyyummaa oromootti aanee diddaa COCn nurraa haa dhaabbatu jedhu akka ta’es eeruun nu ga’e addeessee jira.
Mooraa kana keessatti diddaan COC erga eegalee torban kan lakkoofsise yemmuu ta’uu hanga har’aa deddeebi’anii gaaffii haa gaafatan malee deebiin tokkoyyuu nuuf deebi’uu hin dandeenye jechuun qeerroon moorichaa diddaa isaan haalaan itti fufanii jiru.
Guyyaa wiixata har’aas diddaan kun haalaan jabaachuun erga jalqaberraa kaasee humni tikaa moorichaa diddaa kanatti aaruudhaan humna waraanaa jumlaan gara moorichaatti waamsisee jira.
Humni kora bittinneessaas konkolaataa sireeffiin 4 gara moorichaa erga dhufeen booda konkolaataan 2 moorichatti marsuudhaan 2 ammoo moorichatti olseenanii jiru.
Barattoonni moorichaas mooricha gad lakkisuun diddaa isaanii sodaa nageenyaaf jecha addaan kutanii gara uummata magaalaa Naqamteetti baqachaa jiru.
Waraanni wayyaaneen barattootatti bobbaastes guutummaa naannoo mooraa yuunversiitii wallaggaa dhuunffachuun sagalee guddistuudhaan barattoota doorsisaa akka jirullee maddi oduu qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaarraa gabaasee jira.
« Dirmannaa Oromummaa Uummata Oromoo Waraanni Wayyaanee Itti Bobbaafamee Ardaaf Qe’eesaan irraa Baqqaafamaniif Ajjeffamaa Jiraniif Oromoof Saboonni Cunqurfamoo Impaayera Biyya Ethiyoopiyaa Sagaleen Addunyaatti Dhageesisuufiin Dirqama Namummaati
ONN Live Stream Gaaffif Deebii HD/ ABO J/ Daawud Ibsaa Waliin Kutaa 1ffaa »
Pingback: Warraaksi-biyyaalessaa FXG bifa haaraa ta’een ganama har’aa mooraa yuunversiitii wallaggaa keessatti dhohee jira – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA